Wednesday January 07, 2015 - 20:57:17 in Maqaallo by Editor Caynaba News
Barnaamijga ''Name'' And Shame'' Cidii Hantida Qaranka sii khaladan U Mamuula Awood Sharciga Ka baxsan Ku Adeegta.''''
Mudane' madaxweyne Xaji Axmed M. M Soomaalidu waxay ku maah-maahda nin weyn waxba looma sheego niinka dheerna waxba looma tuso.''' Hadaba wax yar jira dareen leh wer-wer iyo walaac suus dhexgalay wasaaraddaha iyo Haya'adaha dowladda qaarkood una baahan inaad xafiisyada ku booqato subaax kasta inta doorashada kahor.
Hawshii iyo shaqadii aad ku caan baxday loogu'gu majeeran jiray ila dowladdii dhex ee Soomaaliya oo aheyd ilaaliinta hanti dhawrka qaranka madaxweyne yaan dhallinyaro iyo haween ku gacan dhaafin ceeb iyo taariikh mad-madow lehaanay kusoo jeediin.
Sidii Marwo Dr Edna Adan hadalka uga dhawaajisay dareen tuhun iyo shakii iyaa jira masuuliyiinta qaarkood kalsooni isgu qanciyeen inaay awood gaar ah sheegtan hawlaha qarankana ku fuliyan meel kastana wey ka dhacdan calaamka oo Somaliland oo keliya kuma koobna fal-falkaasi laakiin adiga Xaji Axmed Siilanyo inta ku taqaan taariikhdada dahabka ah kuna suntan wax qabad hiil ummadeed xaqsoor caddalaad siiba hanti dhawrka qaranka.
Waxaan mamuulka ku bogaadiinayaa arrimo badan oo aay ka kow ka tahay barnaamijka wacyi gelinta masuq-masuuqa wax is daba marinta oo dowladadu Tvga iyo Radio Hargeysa usoo bandhigtay Aafoyiinka xaraanta danyarta iyo ciwaaqib xumadeeda If iyo Akhiroba.
Inkastoo hore loo yidhi dhegahii ilaahay waaniyo ayuunba waano qaadta oo dadkeenuna dhanka xumaatada wax ka deyo iyaago diriq toosan xalaal ah heli karaa mari karaa.'''
Wa run oo mamuuladii horree iyaa shacabka kaga tegay dhaxal wareeg xisaab celin la'aan curaamisay aqoonti sharafti sumcadii qaranka sidaa looga bixii'na qaadan doonto samiir dedaal dacaadnimo baraaruujin joogto ah canaan iyo dabogal intaba.
Waxaa lagama maarmaan ah in goleyaasha shirka golaha wasiiradda laga doodo wixii fal-falkaas ku kaca isgu deyaa inaay hanti qaran ama ha yarto ama ha badato sii sharciga ka baxsan u adeegsadan in xadhig iyo ganaax mudtaysan doonan loona dulqadan doonin.
Ololaha doorashada 20015 astaankiisa wa xisaab celin hanti dhawr qaranka iyo tayeynta shaqallaaha dawliga ah. Ilaahay haydinku garab galo dedaalka wax qabadka dadkeena iyo dalkeena u muujiseen afarti sano iyo dhowrkii bilood waad ducaysan tiin ee sii laba laaba.''''